Safari Technology Kuongorora 124 Iye Zvino Yava Kuwanikwa | Ndinobva mac
Iyo itsva vhezheni yeApple yekuyedza browser inowoneka kune vashandisi. Mune ino kesi ndeye Safari Technology Ongororo vhezheni 124 uye mairi shanduko uye kuvandudzwa mukushanda uye kuchengetedzeka zvinowedzerwa.
Pakati pavo tine kugadzirisa muCSS, Fomu Validation, Web Inspector, Web API, WebCrypto, Media, Kuchengeta uye Performance, pakati pevamwe. Zvirokwazvo kana iwe uri mushandisi weichi browser iwe watoona iyo nyowani vhezheni iripo sezvo yanga ichiwanikwa kwemaawa mashoma, mune chero mamiriro ezvinhu iwe unogona kugadzirisa iyi vhezheni yeApple yekuyedza bhurawuza izvozvi.
Sezvatakataura, ndeye yakazvimirira bhurawuza kubva kune yepamutemo vhezheni yeSafari uye yemahara zvachose iyo inogona kushandiswa neese munhu anoda uye ane Mac ine macOS Mojave kana macOS Catalina. Mune zviitiko izvi, vashandisi vazhinji vanoedza iyi browser Mhinduro zhinji Apple ichagamuchira kuti uone uye kugadzirisa mabugs mune epamutemo shanduro dzebrowser saka zvinogara zvakanaka kuti uve nevazhinji vashandisi vachishandisa iyi browser.
Ivo zvakare vanowedzera zvakafanira kururamisa mune anotevera mavhezheni eiyo yepamutemo browser. Sezvo isu tichigara tichifunga kuti izvo zvidzoreso izvo zvinoburitswa kugadzirisa Safari Technology Preview. hapana account yekuvandudza inodikanwa uye chero munhu anogona kudhawunirodha. Iwe unongofanirwa kuwana iyo webhusaiti webhusaiti uye kurodha yazvino vhezheni vhezheni ye Safari Technology Preview. Iyi yazvino bhurawuza yekuvandudza yave kuwanikwa kuburikidza neMac App Store kune chero munhu akamboburitsa bhurawuza kare
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » Safari Technology Preview 124 yave kuwanikwa